निष्ठावान्, कर्तव्यपरायण र इमानदार भएर नै सबैको समर्थन पाएको हुँ «
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ यतिबेला नेतृत्व परिवर्तनको अन्तिम सँघारमा छ । महासंघको विधानले वरिष्ठ उपाध्यक्षलाई स्वतः अध्यक्ष बनाउने व्यवस्था गरेकाले अबको चर्काे प्रतिस्पर्धा यसै पदमा हुनेछ । हालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा यसै साता हुने अधिवेशनपछि स्वतः अध्यक्ष बन्नेछन् । वरिष्ठ उपाध्यक्षको चर्काे प्रतिस्पर्धामा हालका उपाध्यक्षद्वय किशोर प्रधान तथा चन्द्र ढकाल रहेका छन् । उद्योग संगठन मोरङ र पूर्वाञ्चल उद्योग वाणिज्य संघको नेतृत्व सम्हालिसकेका प्रधान आफूलाई मध्यमवर्गीय व्यवसायी भन्न रुचाउँछन् । मुलुकको तल्लो तहदेखि ठूला उद्योगसम्मको जानकार भएका उनी राजविराजमा जन्मेर व्यावसायिक रूपमा विराटनगरमा स्थापित भएका हुन् । हाल उनले प्रिस्टेस कंक्रिट पोल, पाइपलगायतका उद्योग सञ्चालन गरिरहेका छन् । महासंघमा २८ वर्ष लामो अनुभव र योगदान भएकाले अबको नेतृत्व आफूले गर्ने समय आएको प्रधान बताउँछन् । महासंघमा सहमतीय संस्कार सुरु गर्ने जमर्को गरिए पनि मंगलबार साँझसम्म महासंघमा वरिष्ठ उपाध्यक्षका लागि सहमति भएको छैन र हुनसक्ने सम्भावना पनि निकै कम रहेको पूर्वअध्यक्षहरू बताउँछन् । त्यसैले वरिष्ठ उपाध्यक्षको चयन प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाबाट नै हुने देखिन्छ । यसै क्रममा चुनावी विषयमा केन्द्रित रहेर कारोबारकर्मी सरस्वती ढकालले वरिष्ठ उपाध्यक्षका उम्मेदवार किशोरकुमार प्रधानसँंग गरेको कुराकानीको सार :
महासंघको चुनावी मैदानमा हुनुहुन्छ, वरिष्ठ उपाध्यक्षमा तपाईंको उम्मेदवारी किन ? आगामी दिनमा महासंघलाई अगाडि बढाउने तपाईंका एजेन्डा के छन् ?
नेपाल उद्योग महासंघमा मेरो उम्मेदवारी जित्नका लागि, सेवाका लागि र कर्तव्यनिष्ठ भएर काम गर्नका लागि हो । नेपालभर उद्योगी–व्यवसायीहरूलाई दुःखसुखमा साथ दिनका लागि पनि हो । विधानले नै वरिष्ठ उपाध्यक्षलाई स्वतः अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएकाले शेखर गोल्छाजी आगामी कार्यकालको नेतृत्व गर्नुहुन्छ । भावी अध्यक्ष गोल्छाजीले तय गरेको १० वर्षे कार्ययोजना छ । यसले महासंघलाई गतिशील दिशातर्फ लैजान्छ । त्यसमा हाम्रो योजना पनि समावेश छ । दूरगामी असर पार्ने क्षेत्रको गहन अध्ययन–विश्लेषणका लागि अर्थशास्त्री तथा सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा छ । यसलाई कार्यसमितिबाट अनुमोदन गरेर जिल्लानगर र वस्तुगतका सम्पूर्ण सदस्यसँग त्यसको अनुमोदन गर्ने प्रक्रियामा हुनुहुन्छ । त्यसमा हामीले सोच र योजना समावेश गरेका छौँ । मैले कृषिलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्नेमा योजना पेस गरेको छु । तत्कालीन मुद्दामा कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकीकरण गर्ने, मध्यमकालीन योजनामा कोभिडले पर्यटन क्षेत्रमा पारेको प्रभाव न्यूनीकरण गर्दै तुरुन्त सो क्षेत्रको विकासतर्फ लाग्ने हो । यसका साथै वन क्षेत्रको विकासमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी बनाएर जानुपर्छ भनेर योजना बनाएका छौँ । वन क्षेत्रको भरपुर उपयोग गर्ने, जसबाट आफ्नै देशमा भएका उत्पादनलाई बृहत् रूपमा व्यवसायीकरण गरेर परिचालन गर्ने र आयात प्रतिस्थापन गर्ने हो । दीर्घकालीनमा पूर्वाधार विकास रेलमार्ग, पानीजहाज ड्राइपोर्ट, विशेष आर्थिक क्षेत्रको कुरा आएको छ । अन्य जति पनि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको कुरा आएको छ, त्यसलाई सहकार्य गर्दै अर्थतन्त्रको विकास गर्ने दीर्घकालीन योजना छ । यसका साथै सचिवालयको सुदृढीकरण अहिलेको आवश्यकता हो । जिल्ला–नगरलाई पनि हामीले सुदृढीकरण कसरी गर्ने भन्ने विषयमा आन्तरिक छलफल भएको छ । वस्तुगत तथा एसोसिएट सबैका कार्ययोजना छन्, पहिलो कार्यसमितिबाट अनुमोदन भएपछि अगाडि बढ्ने प्रक्रियामा छ ।
तपाईंलाई अध्यक्ष भवानी राणासहित भावी अध्यक्ष शेखर गोल्छा र निवर्तमान अध्यक्ष पशुपति मुरारकाको समर्थन छ । उहाँहरूको समर्थनका कारण तपाईंको योग्यता, क्षमता तथा एजेन्डा भने छायामा परेको जस्तो लाग्दैन ?
मेरो योग्यतालाई अझ बढाउन खोज्नुभएको हो । मलाई उहाँहरूले छायामा पार्नेभन्दा पनि थप परिष्कृत गर्न खोज्नुभएको हो । मसँग भएको शक्तिलाई मलजल गरेर अझ शक्तिमान बनाउन खोज्नुभएकाले उहाँहरूको समर्थन मलाई आएको हो ।
तपाईं अघिल्लो कार्यकालमा शेखर गोल्छासँगै प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्थ्यो र अहिले उहाँकै समर्थनमा अघि बढ्नुभएको छ । राजनीतिमा देख्न पाइने समीकरण निजी क्षेत्रमा पनि देखियो भन्न मिल्छ यसलाई ?
हामी व्यवसायी हौं । व्यवसायीको एकमात्र सोच व्यवसाय कसरी राम्रो गर्ने र यसका समस्याहरूलाई कसरी समाधान गर्नेमै छ । हो, अघिल्लो पटक शेखर गोल्छासँगै लडेको हो र अहिले उहाँको समर्थन छ । चुनावमा समीकरण हुने भनेको विश्वास, लगनशिलता र कार्यक्षमतालाई हेरेर गरिने कुरा हो । मैले पशुपति मुरारको पालामा विपरीत प्यानलमा हुँदा पनि काम गर्न सहयोग गरेँ । त्यसपछि भवानी राणाजीको कार्यकालमा एक वर्षपछि म पुनः महासंघमा आएँ । मुरारका र राणा दुवैको कार्यकाल भन्डै पाँच वर्षमा निष्ठावान्, कर्तव्यपरायण र इमानदार व्यक्ति प्रमाणित गरेकाले मात्रै शेखर गोल्छाजीले आफ्नो नेतृत्वमा यस्तो व्यक्ति चाहिन्छ भनेर टपक्क टिपेर आफ्नो टिममा राख्नुभएको हो । हिजो के भयो भन्दा पनि भोलि के गर्ने भन्ने कुराको सोच गोल्छाजीले लिनुभएको छ, त्यसमा म खरो उत्रेकाले उहाँले मलाई समर्थन गर्नुभएको हो । म उहाँसँग लडेको थिएँ, यसमा मतलब छैन । अब नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलाई कसरी अगाडि बढाउने, कसरी राम्रो काम गर्ने, कसले बढी काम गर्न सक्छ भनेर उहाँले टिम बनाउनुभएको छ ।
महासंघमा सहमतिको चर्चा चले पनि ठोस रूपमा अगाडि बढ्न सकेको पाइँदैन । सहमतिको प्रयास अगाडि बढ्न नसक्नुको कारण के हो ?
सहमति हुन नसकेको भन्दा मलाई आश्चर्य लाग्यो । राम्रो काम हुनका लागि एक मिनेट काफी हुन्छ । एउटा सोचले धेरै विकास गर्न सकिन्छ । अहिले समय छ । अग्रजहरूले काम गर्दै हुनुुहुन्छ, त्यसको पर्खाइमा बसौँ, समयले सहमति गराउन सक्ने सम्भावना पनि हुन्छ । सहमति नभए प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा इच्छुकले भाग लिन्छ ।
अझै सहमति हुन सक्ने अवस्था छ र ?
सहमति भयो भने भयो, त्यसका लागि धेरै समय लाग्ने होइन । यता सहमतिको प्रक्रिया पनि अगाडि बढेको छ भने हामी आफ्नो तरिकाले चुनावी तयारीमा पनि छौँ । सहमति हुनासाथ हामी मिडियामा जानकारी दिन्छौँ । यदि भएन भने प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाको विकल्प छैन । अहिले सहमति वा निर्वाचन यो नै भन्न सक्ने अवस्था छैन ।
तपाईंले यो निर्वाचनमा जित्छु भन्ने आधारहरू चाहिँ केके हुन् ?
मैले जित्ने थुप्रै आधार छन् । मैले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा सबैभन्दा लामो समय योगदान दिएको छु । इमानदारीपूर्वक महासंघले दिएको जिम्मेवारी पूरा गरेको छु । महासंघको इतिहासमा दुईवटा उल्लेखनीय काम पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप (पीपीपी) जुन मैले चेयर गरेको समितिबाट स्थापित गरेको काम हो । स्थानीय आर्थिक विकासको मुद्दा उठाउने व्यक्ति पनि मै हुँ । नेपाल बिजनेस फोरमको म संस्थापक हो । नेपालभरका उद्योगी–व्यवसायीहरूलाई म महासंघमा हुँदा सौगात दिएको छु । उल्लेखनीय भूमिका पनि मेरो इतिहासमा छ । नेपालभरका उद्योगी–व्यवसायीको विश्वास, निष्ठा, २८ वर्ष महासंघमा मैले काम गर्दा उहाँहरूले दिएको उत्साह हो । वर्तमान अध्यक्ष, भावी अध्यक्ष र पूर्वअध्यक्षहरूको साथ र आशीर्वाद पनि हो । यी सबै कारणले गर्दा जित सुनिश्चित भएको तपाईंहरूले देख्न सक्नुहुन्छ । म महासंघमा काम गर्न र परिवर्तन देखाउनकै लागि जान लागेको हो, परिवर्तनका लागि नेतृत्वमा पुग्नु आवश्यक छ । किनभने नेतृत्वले नै परिवर्तन दिन सक्छ । परिवर्तनले संवाद गर्छ । एउटा आममानिसको सन्देश सरकारसम्म पुग्दैन । जिल्ला–जिल्लाका व्यवसायको समस्या सरकारसम्म पुग्दैन । जबसम्म सही नेतृत्वमा पुग्दैन तबसम्म दिशानिर्देश हुँदैन । चीन–भारतको प्रगति किन भयो, त्यहाँको नेतृत्वकै कारणले हो । विहारको परिवर्तनबाट हामीले धेरै सिक्नु जरुरी छ । यस्ता परिवर्तनका लागि निजी क्षेत्रबाट महासंघको भूमिका महŒवपूर्ण हुन्छ । महासंघमा योग्य र सक्षम व्यक्ति पुगेको खण्डमा परिवर्तन गर्न सकिन्छ ।
महासंघको यो निर्वाचनले निजी क्षेत्रबीच झनै दूरी बढाएको छ । तपाईं निर्वाचित हुनुभयो भने यो खाडललाई पुर्न के गर्नुहुन्छ ?
निर्वाचनका बेला केही दूरी बढ्नु स्वाभाविक प्रक्रिया हो । यो दूरी भनेको १३ गतेसम्मका लागि मात्रै हो । त्यसपछि हामी सबै एक ठाउँमा मिलेर समस्या समाधानमै जान्छौँ । विचारको द्वन्द्व भएपछि बाउछोरामा पनि केही समयका लागि मतमतान्तर हुन्छ । त्यसैगरी श्रीमान्–श्रीमतीमा पनि हुन्छ । यो त एउटा प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाको नम्स हो । यसलाई गलत अर्थमा लिन हुँदैन । यसलाई सकारात्मक सुरुवातका रूपमा लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ । तर १४ गते नतिजा आइसकेपछि सबै साथीहरू पुनः एकै ठाउँमा हुन्छौँ । अर्काे प्यानलका केही साथीहरूले पनि जित्छन् भने स्वागतका साथ लिएर काम गर्ने हो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा १४ गतेपछि प्यानल भन्ने हुँदैन, जिम्मेवारी हुन्छ, काम हुन्छ ।
मुलुक कोभिड संकटले थला परेको बेला आम व्यवसायीका समस्या बिर्सेर तपाईंहरू यसरी आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र गुटबन्दीका कारण किन निजी क्षेत्रको आलो घाउमा नुनचुक छरिरहनुभएको हो ?
नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत रिफाइनान्सिङका कुराहरू ल्याएको छ । मौद्रिक नीति ल्याउँदा हामीलाई हर्ष लागेको थियो, व्यवहारमा नहुँदा दुःख लागेको छ । बैंकिङ क्षेत्रलाई चुस्तदुरुस्त बनाउने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ तत्पर भएर लाग्नुपर्छ । साना तथा मझौला उद्योगलाई यसले समेट्न सकेको छैन । सीमित व्यवसायलाई मात्रै लिएर अगाडि बढ्ने परम्परा छ, यो दुःखदायी छ । यसलाई सुधार गरेर जानुपर्ने आवश्यकता छ । निर्णय भएका कुराहरू पनि लागू भएका छैनन् । कार्यान्वयनमा हुने कमी–कमजोरीमा कसैको ध्यान जान सकेको छैन । जिल्ला–जिल्लामा बसेका बैंकहरूले लिइसकेको २ प्रतिशत ब्याज पनि फिर्ता गरेको छैन । महासंघमा ठूला उद्योगीहरूका विषयहरू समावेश भएका छन्, तर साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई बेवास्ता गरिएको छ । साना उद्योगीलाई धेरै कुरा थाहा पनि हुँदैन । उनीहरूलाई शोषण गर्ने परम्परा बैंकहरूको छ, त्यसको अन्त्य गर्नु जरुरी छ । नेपाल बैंकर्स एसोसिएन, नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पनि यो विषय भनिसकिएको छ । अब म महासंघ गइसकेपछि पनि बुलन्द रूपमा यस्ता मुद्दाहरूलाई उठाउने नै छु । हालसम्म कानमा तेल हालेर बसेका निकायको अब चिरफार हुन्छ ।
आफ्नो टिमलाई कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ ?
हाम्रो टिम पूर्णरूपमा सक्षम, सबल र कर्तव्यनिष्ठ छ । जिल्ला–नगर उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठजी, जो लामो समयदेखि महासंघमा हुनुहुन्छ, निजी क्षेत्रका समस्याका बारेमा उहाँलाई पूर्ण ज्ञान छ । कर भ्याट, अन्तःशुल्क, बैंकिङ क्षेत्रको गहिरो ज्ञान उहाँमा छ । सेवा गर्न तत्पर भएर उहाँ आउनुभएको छ । त्यसैगरी एसोसिएटमा १६ वर्षदेखि काम गरिरहनुभएको, हजारौं व्यक्तिलाई रोजगारी दिएको शौरभ ज्योतिजस्ता व्यक्तित्व हुनुहुन्छ । वस्तुगततर्फ अञ्जन श्रेष्ठजी विभिन्न चरणमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा आफ्नो क्षमता प्रमाणित गरिसकेको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ । तसर्थ मेरो टिमको सम्मिश्रण सक्षम र सबल भएकाले साथीहरूले मेरो टिमलाई मत दिएर विजय बनाउनुहुन्छ भन्नेमा विश्वस्त छु ।
महासंघमा तपाईंले यसपटक वरिष्ठ उपाध्यक्ष्यमा विजयी भए नेतृत्व गर्ने अर्काे निर्वाचनपछि मात्र हो । त्यो बेला यो टिम नरहन पनि सक्छ भने अहिले प्यानल नै बनाउनुपर्ने बाध्यता किन रह्यो ?
हामीले प्यानल होइन, सक्षम व्यक्तिहरूको टिम बनाएको हो । आफ्नो टिम बनाउन पाउनुपर्छ । नेतृत्वमा आउने व्यक्तिले आफ्नो टिम बनाउनु पर्दैन ? राष्ट्रपति भएपछि उपराष्ट्रपति, सिनेट मेम्बर जिताउन परेन, त्यसका लागि टिम चाहिन्छ । अध्यक्षले बनाएको टिम भनेको उहाँको आउने कार्यकाललाई सफलता साथ सम्पन्न गर्नका लागि हो । टिमलाई प्यानल भन्ने होइन । किशोर प्रधान समूह भनेका छौँ । किशोर प्रधान क्याप्टेन हो, लेफ्टिनेन्ट जर्नल कमान्डर इन चिफ शेखर गोल्छा हो । उहाँको कार्यकाललाई सफल बनाउन एउटा क्याप्टेनका रूपमा हामीले समूह बनाएको हो । जुन टिममा इमानदारिता, पारदर्शिता, सक्षमता र लगनशिलता छ । यो सबै कुराको सम्मिश्रणबाट हाम्रो टिम बनेको छ । यसको नतिजा जितबाट नै थाहा पाउन सक्नुहुन्छ ।
र अन्त्यमा केही भन्नु छ ?
म एउटा अनुरोध के गर्न चाहन्छु भने अहिलेको बखतमा कुनै लोभ–प्रलोभनमा नपरिकन आफ्नो इज्जत जोगाएर आत्माबाट मत हाल्नुस् । तपाईं द्विविधा भएर मत नहाल्नुस् । द्विविधामा भोट हाल्नुभयो भने तपाईंलाई नै त्यसले नोक्सान दिन्छ । समाजमा पनि विकृति पैदा हुन्छ ।